Ciyaaryahan hal laad kubadeed oo kaliya dunida caan uga noqdey oo geeriyoodey – SBC
Ciyaaryahan hal laad kubadeed oo kaliya dunida caan uga noqdey oo geeriyoodey
Theyab Awana, oo dunida caan ka noqdey bishii July ee sanadkan ka dib markii hal laad kubaadeed oo uu dhaliyey uu soo jiitay aduunka isla markaana adeega Interner-ka ee You Tube-ka loo yaqaan goolkii uu dhaliyey uu ka noqdey mid ka mid ah muuqaalada ugu daawadashada badan ayaa ku geeriyoodey shil baabuur oo ka dhacay wadanka Isu tagga Imaaraadka Carabta.
Awana oo 21 sano jir ahaa ayaa bishii July isagoo u safan wadankiisa Imaaraadka oo ciyaar saaxiibtinimo la lahaa wadanka Lubnaan wuxuu dhaliyey gool rigoore ahaa balse aanu u dhalin sida caadiga ah ee ciyaartoydu u laado gool ku laadka waxaana isagoo sii jeeda uu kubadii uu gadaal gadaal ugu laadey goolka taasi oo goolhayihii Lubnaan uu ku guuldareystey kubadaasi in uu qabto.
Ciyaarta oo xiligaasi mareysay 5-0 ayaa goolkii gadaal gadaasha uu u laaday Awana wuxuu ka dhigay 6-0 waxaase isla markiiba aad uga carooday falkaasi tababaraha kooxda qaranka Imaaradka Carabta oo badal ku bixiyey ciyaaryahankaasi isagoo ku eedeyey in uu bahdil ku sameeyey kooxda ka soo horjeeda maadama isagoo sii jeeda uu kubada ku laaday garoonka uuna gool sidaasi ku dhaliyey.
Muuqaal kooban oo la soo dhigay You Tube-ka ayaa waxaa fiirsadey in ka badan 1 milyan oo qof taasi oo ka dhigtey goolkaasi mid ka mid ah muuqaalada dunida loogu daawashada badan yahay, isla markaana uu sidaasi caan ku noqdey ciyaaryahankaasi.
Awana Theyab ayaa shilka baabuur wuxuu galey isagoo ka soo ambabaxay magaaalda Al- Ain wuxuuna ku soo jeeday magaalada Abu Dhabi waxaana gaariga la saarnaa walaalkiis oo 13 sano jir ah oo isaguna haatan ku jira koomo.
Agaasimaha kooxda xulka qaranka Imaaraadka Carabta Ahmed Saeed ayaa u sheegay Telefishinka Dubai Sports in wadanka Imaaraadku uu waayey ciyaaryahan mustaqbal u lahaa isla markaana xidig ahaa.
Awana waxaa kale oo uu u ciyaari jirey kooxda Bani Yesi, wuxuuna wadankiisa kula guuleystey 7 koob.
Halkan Link Video ka daawo goolkii la yaabka lahaa ee uu dhaliyey Awana.